Times Of Nepali » बैशाख १ गते आत्म*ह*त्या गर्दै पुण्य गौतम / भिडियो हेर्नुहोस।
27 03 20 |
बैशाख १ गते आत्म*ह*त्या गर्दै पुण्य गौतम / भिडियो हेर्नुहोस।
बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा रहेको छ ।
यो पनि समाचार पढ्नुहोस, चितुवासँग ल डेर छोरीको उद्धार
काठमाडौँ, ५ चैत । तनहुँकी एक महिला चितुवाको आ क्रमणमा परेकी आफ्नी छोरीलाई खोसेर उद्धार गर्न सफल भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३, बनकेवाकी इन्दिरा न्यौपानेले सोमबार साँझ घरमै खेलिरहेकी छोरीलाई आ क्रमण गरी घि सारेर ५० मिटर तल पु¥याएको चितुवासँग ल डेर छोरीलाई बचाएको हो। घरको आँगनमा रहेको धारामा आमासँग हात समातेर पुगेकी २१ महिनाकी संस्कृति न्यौपानेलाई चितुवाले आ क्रमण गरी लगेको थियो। छोरीलाई चितुवाले तानेर लगेसँगै होहल्ला गर्दै आमाले चितुवासँग लडेर छोरी बचाएको हो ।
चितुवाको आ क्रमणमा परी घाइते छोरीको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । चितुवाले बालिकाको पेटमा चारवटा, दुई खुट्टामा एक/एकवटा नङ्ग्रा गाडेर घाइते बनाएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा उपचाररत बालिकाको स्वास्थ्य खतरामुक्त रहेको बालिकाका बाबु नारायण न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । “गाउँमा चितुवाको आ तङ्क सुरु भएको धेरै भयो । हामी सबै परिवार घरमै थियौँ । आमासँगै हात समातेर गएकी छोरीलाई चितुवाले ताने पनि श्रीमतीले साहसका साथ चितुवासँग भि डेर छोरी बचाउन सफल भइन्”, न्यौपानेले बताए ।
आफूसँग रहेकी छोरीलाई चितुवाले ता नेपछि चितुवाको पछिपछि गएर छोरीको खुट्टा समात्न भ्याएकाले बचाउन सकिएको इन्दिराले बताए । “चितुवाले छोरीलाई लगेको थाहा पाएपछि चिच्याउँदै चितुवाको पछिपछि दौडिएँ । छोरीलाई समातेर तान्दै गर्दा मलाई समेत आ क्रमण गर्न थालेको चितुवा गाउँका मानिसले होहल्ला गरेपछि भागेको थियो उनले भने। चितुवाको आ क्रमणबाट तनहुँका विभिन्न ठाउँमा नौ जना बालबालिकाको मृ त्यु भइसकेकाले गाउँमा चितुवाको त्रा स बढेको इन्दिराले बताए। “गाउँमा चितुवाको ड र भइरहेको छ। घरमै खेलेकी छोरीलाई तानेपछि जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सोचेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि छोरीलाई बचाउन पुगेँ”, उनले भने ।
घ टनास्थलको अध्ययन गर्न पुग्नुभएका डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले घरदेखि ५० मिटर तल बालिकालाई लगेको अवस्थामा आमाले चितुवाबाट बालिकालाई खोस्न सफल भएको बताए । “आमा ड राएर चितुवाको पिछा नगरेको भए बालिकाको ज्या न जाने अवस्था थियो। आमाले आफ्नो ज्या नको जोखिम मोलेरै भए पनि बालिकाको उ द्धार गरेको पायौँ”, बरालले बताए । चितुवाको आ क्रमणबाट घाइते बालिकाको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिएका छन् । गुरुङले चितुवाको आ क्रमणबाट घाइते बालिका खतरामुक्त रहेको र आमा सामान्य घाइते रहेको बताए । तनहुँमा दुई वर्षको अवधिमा चितुवाको आ क्रमणबाट नौ जनाको मृ त्यु भइसकेको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
बैशाख एक गते आत्मह त्या गर्दै पुन्यगौतम ! हेर्नुहोस पुण्य गौतमको यो भिडियो
प्रकाशित मिति March 27, 2020
दुर्गेश थापाको नयाँ तीज गीत ले तोड्यो सबै रेकर्ड ( भिडियो )
उत्तरी नेपालमा श’क्तिशाली भूकम्पको धक्का !
५ बर्षपछी आफुमाथि भएको दुर्व्या’वहार बारे बोलिन्- नायिका साम्राज्ञी (भि,डियो सहित)
सरिता गिरीको ठाडो चेतावनी नेपाल रहन्छ त मधेसी ले चाए रहन्छ / भिडियो हेरौ।।